Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na France » Ọ dị nchebe na Paris nwere nnukwu ngagharị iwe na COVID?
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Paris kpọnwụrụ akpọnwụ ka puku kwuru ngagharị iwe megide COVID-19 gafere ahụike
Ndị na-enwetabeghị ọgwụ mgbochi COVID-19, ma ọ bụ na-emeghị atụmatụ ọ bụla, na-ekwu na ngafe ahụike na-ebelata ikike ha wee mee ka ha bụrụ ụmụ amaala klas nke abụọ.
Nnukwu ngagharị iwe malitere na France maka ngafe ahụike COVID-19.
Karịrị ngagharị iwe 200 ahaziri na France maka taa.
Ụmụ amaala France na -eme ngagharị iwe megide ihe ha kpọrọ imebi ikike ndị mmadụ.
Oke igwe mmadụ nke ndị ngagharị iwe juputara n'okporo ụzọ Paris na Satọde, na -ebute ọrụ obodo niile kwụsị na mberede isi obodo France.
Ọtụtụ puku ndị ngagharị iwe gafere Boulevard Saint-Marcel dị na ndịda ọwụwa anyanwụ obodo ahụ na-aga Place de la Bastille, na-eme ngagharị iwe megide ihe ha kpọrọ imebi ikike ndị mmadụ.
Na mkpokọta, ihe karịrị ngosipụta 200 megide ihe a na-akpọ ngafe ahụike COVID-19 ka emebere maka Satọde gafee France.
Ndị mmadụ na -ejide kaadị mkpọsa nke na -agụ 'Kwụsị', na -abụ abụ 'Nnwere onwe' ma na -etikwa ịgbà. A hụrụ ụfọdụ ndị ngagharị iwe a ka ha yi akwa jaket - akara nke nnukwu ngagharị iwe ọzọ na -arụ ọrụ na France ihe dị ka otu afọ na ọkara n'etiti Ọktoba 2018 na Machị 2020.
Ihe dị ka puku mmadụ abụọ sonyere na ngagharị a, dịka ụlọ ọrụ mgbasa ozi France si kwuo. N'ebe Place de la Bastille, ebe ngagharị a na -aga, ndị uwe ojii jiri anwụrụ anya mmiri megide otu ndị ngagharị iwe chọrọ isonye na ngagharị iwe a.
Ndị na -eme ngagharị iwe gbalịkwara isi n'okporo ụzọ ngagharị na Paris pụọ n'ọtụtụ oge ndị ọzọ, na -akpali ndị uwe ojii itinye aka, ụlọ ọrụ mgbasa ozi France kwuru. Mgbakọ ndị ahụ gara n'udo ma ọ bụghị.
A hụkwara nnukwu nnọkọ n'akụkụ ndị ọzọ nke Paris. Ngụkọta ngagharị iwe ise emere n'isi obodo France na Satọde. Oke igwe mmadụ gbakọtara na nso ụlọ elu Eiffel. Ndị na -eme ngagharị iwe a nọ na -efegharị ọkọlọtọ mba France ma na -ebu nnukwu ọkọlọtọ oroma edere 'Freedom'.